Ukumaka Emgwaqweni Abenzi Bezinsiza kusebenza Zokusiza | I-China Road Marking Auxiliary Equipment Equipment & Abahlinzeki
—— Izinsiza kusebenza Ezimaka Umgwaqo ——
Imoto ye-LXD Boost (uhlelo lokugibela)
Singabakhiqizi abakhulu kunabo bonke baseChina nefektri yemoto yokuqinisa. Kungani uhamba ngenkathi ukwazi ukuhlala? Sebenzisa imoto yokuqinisa ixhuma umshini wokumaka umgwaqo, ukusebenza kahle komsebenzi kuzothuthukisa izikhathi ezingama-2-3.
Umshini Wokumaka Oku-LXD
Singabakhiqizi abakhulu kunabo bonke baseChina nefektri yemishini yangaphambi kokumaka. Umshini wokumaka kwangaphambili we-LXD ngumshini osizayo ekwakhiweni kokumaka umgwaqo. Ingamaka ukumakwa kwangaphambili ngokukhululekile ngokuya ngezidingo zokwakhiwa ukugwema ukumaka okuyiphutha. Futhi ingafeza imigqa engu-1-3 ngokuzimela, okuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokwakha.
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina nefektri yemishini yokuqala. Umshini we-LXD-II priming umshini wokusiza wokwakha umgwaqo wokwakha.it ifakwe injini kaphethiloli kanye ne-air compressor ezenzakalelayo, inenzuzo yokusebenza kahle kakhulu, okonga abasebenzi, ukusebenza okulula, ukugcinwa okulula, nokuphila isikhathi eside.
Umshini Oshaya Umshini We-LXD-II High Pressure Road
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina nefektri yomshini wokucindezela u-Surface Blow Machines. Umshini wokushaya umgwaqo we-LXD-II ngumshini osizayo wokwakhiwa komugqa womgwaqo, obejwayele ukusetshenziselwa ukushanela umgwaqo ngaphambi kokwakhiwa kokumakwa komgwaqo.
Isweeper se-High Pressure Road
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina kanye nefektri yomshayeli womgwaqo onengcindezi ephezulu. Izinsiza zokumaka emgwaqeni — umgwaqo oshanela ingcindezi ephezulu esetshenziselwa ukuhlanza usimende opha, udaka, isisindo samanzi, nolayini wokumaka opende obandayo. Ifakwe amandla okulawula angalungiswa ngokuya ngesimo sendawo yomgwaqo.
I-LXD-II Ingcindezi Ephakeme Yomgwaqo Oshaya Futhi Ishanela Umshini Wonke-ngaphakathi
Singabakhiqizi abangochwepheshe abakhulu kunabo bonke baseChina nefektri yomgwaqo onengcindezi ephezulu eshaya imishini eshanela. Isetshenziselwa ukuhlanza usimende opha, udaka, inhlabathi esheshayo ebusweni bomgwaqo. Futhi kungaphephetha ukungcola nothuli lomgwaqo. Inezinzuzo zokwenza ngcono ukusebenza kahle futhi isindisa abasebenzi.